Indawo ephephile kakhulu emotweni yengane
Umzali ngamunye uthatha umsebenzi wakhe ukubeka ingane emotweni endaweni ephephile. Abaningi bakholelwa ukuthi indawo ephephile emotweni yomntwana itholakala ngemuva komshayeli. Lo mbono usekelwe eqinisweni lokuthi uma kwenzeka isimo esiphuthumayo, umshayeli uzovula isondo ngakwesobunxele, ezama ukungazivikeli emthonjeni.
Ngaphezu kwalokho, ngokusho kwezibalo, inani elikhulu lezingozi zaseRussia yizo zokushayisana, futhi ngokuvamile abakhiqizi bemoto benza ohlangothini lwesobunxele lwemoto luphikisana nokuguquguquka uma kwenzeka ukushayisana kwekhanda kunalokho okulungile. Ngakho-ke, phakathi nokuhlolwa kwe-crash, izimoto "zishaya" ngakwesokunxele.
Ungaphiki ukubuka okuningi nokunye, okusekelwe nedatha yezibalo. Kucatshangwa ukuthi ukushayisana okuningi ngokushayisana kwekhanda kwenzeke ngenxa yokuphuma kwemoto eya emgwaqeni ozayo, ngakho umthelela ungakwesokunxele semoto. Ngokusho kwalokhu, indawo ephephile ihamba phambili ngakwesokunene komshayeli, ngoba le ngxenye ithola umonakalo omncane. Kodwa-ke, akukho zifundo ezenziwe ensimini yeRussia Federation ukuqinisekisa lezi zinkombinkimbi.
EU.SA ngo-2006 ososayensi be-University of Buffalo bahlaziya izibalo zengozi ngo-2000-2003. Ngenxa yalokho, baphetha ngokuthi indawo ephephile emotweni iyisihlalo esiphakathi kwesihlalo esingemuva. Futhi ngokuvamile, izihlalo zangemuva ziphephile kunaphambili ngaphambili ngo-73%. Isihlalo esiphakathi sikhululekile ngemuva, kuqhathaniswa nezinye izindawo emotweni, futhi akukho "ukucindezela" isikhala phakathi nokushayisana. Lesi yisizathu esibaluleke kakhulu sokuphepha kwakhe. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi kunokunye ukushayisana okuhlangene eU.SA kunezingaphambili, ngoba imigwaqo emigwaqweni yokuhamba emgwaqeni ivame ukuhlonywa ngezicingo zekhonkolo, futhi imithetho yokushayela emitheni yethrafikhi icacile kakhulu. Abakhiqizi bezimoto baseMelika baye babenza bangasengozini kakhulu ezinhlangothini, kodwa bajwayele ukuguqulwa ngemithelela engaphambili. E-Russia, kunezimpikiswano eziningi.
Kulula kakhulu ukubeka isihlalo semoto emzimbeni ezihlalweni zangemuva, okwenza uhlobo lwe "sofa". Kusobala ukuthi izihlalo zangemuva zifaneleke kakhulu, lapho kunezihlalo zokuhlala ezigcwele ezintathu ezihlukene. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngokuvamile kunconywa ukubeka izihlalo zemoto esihlalweni esiphakathi emgqeni ongemuva wezimoto eziyisihlanu kanye nesihlalo esiphakathi emgqeni wangemuva noma ophakathi kwezimoto eziyisikhombisa.
Kodwa-ke, okubi kakhulu, ezimotweni eziningi isihlalo esiphezulu asifanelekile ukufaka isihlalo somoto wengane. Amamodeli wekilasi C ngokuvamile ane-armrest-out-out ekhishwe esihlalweni esiphakathi, futhi ezindaweni eziningi ezithintekayo kanye nase-sedans (futhi ngezinye izikhathi ngisho nasezindaweni zonke), izihlalo ezingemuva zingafakwa ku-60:40, ngenxa yokuthi isihlalo esiphezulu asikho ngaphezu kwengxenye yesihlanu kwendawo yonke .
Abazali abanezingane ezintathu (noma ngaphezulu) bavame ukukhononda ngokuthi abakwazi ukubeka izihlalo zezimoto zezingane ezintathu esihlalweni sangasemuva, kodwa bayiqaphele ukuthi lokhu kungenzeka kuncike kakhulu ngobukhulu bemoto. Uma kukhona izingane eziningana emndenini, ngakho-ke, njengomthetho, imoto yeklasi C iyoba yinkimbinkimbi, ngisho nangaphandle kwezihlalo zemoto. Ezimoto ezifuywayo, ezifana "eziyisishiyagalolunye", "amashumi" nezinye, izihlalo zincane. Uma umndeni unabantwana abangaphezu kwezingu-4, inketho engcono kunazo zonke lapha ukuthengwa kwemoto eyisikhombisa noma udinga ukuba nemoto engaphezu kweyodwa, nokunye okubili.
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuthola izihlalo zezimoto ezinganeni emgodini womgibeli. Okuvame ukukwenza lokhu ngosizo lwamabhande esikhwameni, okufakwe ngaphakathi kwithithi yemoto. Ngalendlela, izihlalo eziningi zezimoto zingagcinwa. Owesibini, ongasetshenziswa kancane, ukhetho uhlelo lwe-Isofix. Lolu hlelo luqukethe iziqondiso zensimbi ezifakiwe esihlalweni semoto, ezinokuvala okukhethekile emaphethelweni nasezinkolweni eziqinile ezifakwe esihlalweni semoto. Le nqubo ibhekwa ngokuphephile futhi elula, kodwa inomphumela omkhulu - hhayi yonke imoto ingahlonywa ngale ndlela, echaza ukuthandwa kwayo okuphansi.
Indlela yokukhipha iphunga elimnandi endlini
Vula isitolo sakho se-intanethi
Indlela yokuchitha endlini yokugezela
Ukuthenga izipho ezinhle zamaholide
Ukukhetha i-Carriage Baby
Yeka indlela owesifazane oneminyaka engu-45 ubudala obheka ngayo intsha
Ukwelashwa kwe-homeopathic kwabesifazane abakhulelwe
Iresiphi yokupheka isobho se-fish
Isibikezelo sezinkanyezi se-scorpion ka-2010
Indlela yokuzivikela emakhazeni
I-bean pods nebhethoni
Izakhiwo eziwusizo ze-kumquat
Iphuma kusuka iklabishi encane
Isaladi ngendwangu ngeshizi nesinkwa
Izinkinokazi zesifazane: i-hybrid yezicathulo nama-sneakers
Konke okuthakazelisayo kakhulu mayelana ne-pasta
Inja ikhiqiza i-American Staffordshire Terrier
Imfundo eshibhile kakhulu phesheya
Isaladi kusuka kunhlanzi ebilisiwe
Ubisi lomama, yini edingekayo ekubukeni